Androy : olona telo maty vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo | NewsMada
Telo ny olona maty tany amin’ny faritra Androy ny volana janoary (telo herinandro lasa) teo . Ny iray, zazavavy 13 taona monina ao amin’ny fokontany Ankilirandro, 5 km avy eo amin’ny distrikan’Ambovombe-Androy. Tsy mbola tena voafaritra mazava ny antony nitarika ny fahafatesan’ity ankizy ity. Satria nandritra ny fidinan’ny delegasiona (mpiandraikitra ny kaominina, mpitsabo, zandary, minisiteran’ny Mponina…) tany an-toerana, efa nihidy tao anaty vata ny razana mba halevina. Namoy ny ainy vokatry ny fanaviana kosa ny olona faharoa ary fanintona ho an’ny fahatelo farany. Anisan’ny antony mamparefo ny fahasalaman’ny mponina any Androy ny tsy fanjarian-tsakafo vokatry ny haintany miseho.
Ankoatra izay, ankizy 42 ao amin’ny kaominina Tsimananada no nentina any amin’ny renivohitry ny distrikan’Ambovombe hotsaboina. Taorian’ny fitiliana, zaza efatra tamin’ireo voalaza fa tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo tena mahery. Efa noraisin’ny Médecins sans frontière izy ireo.
Nandritra ny fandalovan’ny tomponandraikitry samihafa tany an-toerana, nizara sakafo sy rano ho an’ny vahoaka izy ireo. Hisy ny fivoriana mandritra ny roa andro (19-20 febroary izao) any Ambovombe, hamaritana ny vahaolana maharitra iadiana amin’ny hanoanana. Hitady vahaolana mba tsy hiverenan’ny olana isan-taona ny teknisianina.
Efa tonga any an-toerana ny sakafo 70t vokatry ny « Tolo-tanana » nataon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ho an’ny mpianatra. Nametraka toerana famatsian-drano koa ny minisiteran’ny Rano.